Xaajiyo Khamsiin maxaa loo ximay?! Q2AAD – Bashiir M. Xersi
Xaajiyo Khamsiin maxaa loo ximay?! Q2AAD
Date: 4 Apr 2016Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Aqoonyahannada sooyaalku waxay dhahaan, dhacdadu waa i soo celisaa, ee mar qura kaliya ma dhacdo. Heshiiska ay dhawaan dawladdu la gaartay dawladda Sucuudiga, ee ku aaddan, in gabdho shaqaale ah, ay Sucuudiga u shaqo tagi karaan, waxaa ka dhashay buuq badan. Anigu run ahaan ma garan, marka laga reebo, in badi bulshadu ay ka muujisay dareen xooggan, haddana, waxa ay ku salaysan tahay, ii ma cadda. Malo haa, balse, tani ma mudna.
Waxaan wada ogsoonnahay, in tegidda Sucuudigu aysan ahayn wax fudud. Way adag tahay, si aad ku hesho dal ku gal shaqo, waliba adoo baasaboor Soomaali ah wata. Si aan u tagno Sucuudiga, waxaa jirta saddax dhabbe;
(1) In aad dal ku gal CIBAADO qaadato, sida XAJ, CIMRO iwm, ka dibna aad dalka ku dhuumatid, si aad shaqo u raadsatid, iyadoo kafiil lagaa yahay.
(2) In aan dal ku galka ku dalbanno baasaboorro shisheeye sida Itoobiyaan, Keenyaan iwm.
(3) In aan jidkan dheer iyo badda marno, ee halaag, hoog iyo hanfi badan, ayna dheer tahay dhaawac, dhimasho, furasho iyo kufsi gabdheed. Labada hore, waa been cad, oo ujeedka kan koowaad loo baxayo ma ahan CIBAADO, sida uusan kan kale u ahayn dhalashada aad sheeganayso, waliba, ay u badan tahay, in aadan ku qanacsanayn!
Labada hore marka laga soo tago, kan dambe, waa kan ugu badan, ee aan ku tagno Sucuudiga, ahna jidka ugu fudud, haddana, ugu dhib badan. Ugu fudud, oo baasaboor, dal ku gal iyo kaaga ma baahna hawlo kale. Ugu adag, oo waxaad abbaaraysaa silac, rafaad, dhib iyo qatar aad halis ugu jirto dhimasho ama dhaawac, ayna kuu dheer tahay, dhac, jirdil iyo baylah, dumarkana ay u gaar tahay kufsi, faraxumayn iyo xoogid!
Dadka Sucuudiga jooga badidood, waxaan dhihi karnaa, waxay ku tageen jidkaa, marka laga reebo tirada ubadka ah, ee ku dhalatay, haddaba, haddii ay badda Cas sidan u dhib badan tahay, haddii Yemen dhexmariddeeda, xeradii Aljaxiim iyo Alkharas sugayso, haddii ay haddana u sii dhimman tahay, ka gudbidda xadka labada dal, oo inta badan gabdhaha loogu gaysto faraxumayn iyo kufsi, haddii dhibkaa laga badbaadshay, maxaa keenay buuqan badan iyo dooddan aan dhammaadka lahayn? Waanba kasi waayee, gabdhaha, ma kufisiga iyo kaarka ayaad la jeceshihiin?!
Intaa kaliya ma ahan, waxaan ogsoonnahay, inta aan dadku doonta raacin, ee ay ku sugan yihiin is la dalka, in ay la kulmaan bahdil badan. Miyaan inkiri karnaa, in kufsigu ka billowday is la xeebaha doomaha laga raro? Miyaan is ku diiddanahay, in burcadka doomaha rara, ay dadka saaraan doomo jilicsan, oo aan badweyn is ka daaye xeebta dhaafi karin, ka dibna ay ku qallibmaan badda dhexdeeda? Miyaan is ku diiddanahay, in burcadda badaha dadka ka rara ay yihiin gacan ku dhiiglayaal iyo dambiilayaal? Meeqo mar ayaad maqashay doon ayaa ku degtay ama ku soo caarisay badda Cas, xeebteenna ama xeebta Yemen? Ma ogtahay, in dadkaa dhintay ay dileen dad Soomaali ah, oo la yaqaan magacyadooda iyo haybtooda? Ma ogtahay, in aysan jirin qof wax ka qabta, kana hor istaaga falalka wuxuushnimada ah, ee ay dadka ku dilaan?.
Inta buuqa ka keentay, ee baaqa ka soo saaray heshiiska waxaa ka mdi noqday maamulka Puntland, oo hubaal dano siyaasadeed iyo ka leh dacaayad, ee haddii ay daacad ka yihiin baaqaa, may wax ka qabtaan wiilashooda doomaha ruqruqsan ka rara xeebaha bari? Maa wax ka qabtaan wiilashooda dalka saara doomo aan meel gaarayn, oo waliba saacado ka dib, inta xeebta ku soo celiya dhaha waad gaarteen Yemen ee ka daga, saa waxayba joogaan is la dalkii? Maa wax ka qabtaan dhoofinta rasmiga, ee laga sameeyo xeebahooda, inta aysan dhoof sharci ah ku mashquulin? Ogoow, xeebaha Somaliland, laga ma dhoofo, ee kaliya waxaa laga dhoofaa xeebaha bari, haddaba, sabab? Runta ha la isu sheego, haddii kale, been ha loo bahbahleeyo!
Inta dhimata Alle ha u raxmado, iyaga oo nolol halgan ugu jira ayey geeriyoodeen, ee intii badbaadday, maxay la kulmeen? Marka ay gaaraan xeebaha Yemen, inta gabar daan dhalaalaysa leh, gaar ayaa loo kaxaystaa! Ha moodin waxa kaxaysanayaa, in ay Yemen kaliya yihiin, ee waxaa ku jira Soomaali, qaarkood halkaa ayey nolol cusub, oo adag ka billaabaan, qaarka ka lana, adeegsi ka dib, waxay u gudbaan Sucuudi, haddaba, haddii silacaa iyo saxariirtaa laga badbaashay, maxaa keenay buuqan badan iyo dooddan aan dhammaadka lahayn? Waanba kasi waayee, gabdhaha, ma kufisiga iyo kaarka ayaad la jeceshihiin?!
Sidoo kale, waxaan ka wada dharagsannahay waa, in shaqada badi Sucuudigu dumarku ka qabtaan ay tahay ADEEGTO, haddaba, haddii is la dawladda Sucuudigu tiri; intii ay sharcidarro ku soo geli lahaayeen dalkayga, waxaan idiin oggolaanayaa, in aad si sharci ah ku soo gashaan, ugana shaqaysataan, maxaa ku jaban? Anigu ma garan, qofkii i garansiin kara, waanba duubi lahaa!
Dumarka hadda jooga Sucuudiga, oo aan yarayn, waxay ku shaqeeyaan ADEEGTO, haddaba, haddii ay dhib kugu tahay dumar ADEEGTO ku shaqaynaya, maad kuwaa ka soo waddaan, oo dalka ku soo celisaan? Maa runta la is ku sheego, ujeedka ma ahan, in dumar laga naxayee, badi ayaan ka hadlaa, ma diiddani in ay jiraan dad damiir wanaagsan.
Taas kaliya ma ahan, haddii gabar la xushmaynayo, maan ku xushmaynno gurigeeda, dalkeenna, qoysaskeenna iyo bulshadeenna dhexdeeda? Waxaa laga yaabaa, in dad badan oo ka mid ah dadka buuqan wada, uu jiro, mid dhawr dumar ah soo furay, haddana, laga yaabo, in uu dhawr kale furi doono! Yaa daran, in aad dhawr dumar ah adigu aayahooda ku ciyaarto iyo in ay Sucuudiga aadaan, si ay aayahooda wax uga badalaan ama uga qabtaan? Ujeedku amuu yahay, hayga dirina, aan ku dheelee!
Sidoo kale, haddii laga naxayo gabdhaha, maa wax laga qabto kufsiga maalin walba dalka gudihiisa loogu gaysto Kismaayo, Hargaysa, Baydhabo, Muqdishoo ugu magacdheer, Baasaaso iyo magaalooyinka kale? Maa wax laga qabto kufsiga ciidanka Amisom, ee hay’aduhu caddeeyeen, in ay xitaa ku la kacaan gabdho yaryar? Maa waxa laga qabto ragga xilalka haya, sida wasiirrada, xildhibaannada agaasimayaasha, guddoomiyeyaasha iwm oo gabdhaha ku kufsada shaqo ayaan ku siinayaa ama dal ku gal ayaan kuu soo saarayaa, bilo ka dibna ku boodo? Dhagar ka weyn ma lahan iyo niyadjab!
Haddii Xasan iyo dawladdiisa lagu eedaynayo, in ay gabdho gadatay, oo dadka qaar leeyihiin; Siyaad Barre “Aabbaha burburka” wuxuu u Sucuudi u dhoofin jiray xoolaha, halka Xasan u dhoofiyey gabdho, waxaan dhihi lahaa, waxaa jira gabdho badan oo ku dhaqan waddamada carbeed, sida Imaaraadka, Qadar, Cummaan, Kuweyt, Urdun IKK kana shaqeysta, marka ma waxaan dhihi karnaa, gabadhii waddan carbeed tagtaaba waa Dhilleysataa?!
Waxaa jira gabdho badan oo ka shaqeysta ama ku nool waddamada deriska ah, marka ma waxaan dhihi karnaa dhammaantood waa dhillooyin?!
Gabdhaha Soomaaliyeed waxay adduunka ka joogaan meel walba, inta lagu mashquulayo, in dowladdu fursada shaqo ay siisay la xumeeyo, maxaa looga doodi waayey, kuwa ku xiran xabsiyada, Liibiya, Yeman, Kenya, Sucuudiga, Giriigga iyo dhammaan dunida ee ku dhalaya sidii loo badbaadin lahaa dalkoodana nabad loogu soo celin lahaa?.
Midda ugu muhimsan, gabdhaha Sucuudiga aadi doono, ma ahan gabdho la qasbayo ama jujuub iyo gardaduub lagu gaynayo, ee iyaga ayaa rabitaankooda ku tagi doona, ee miyaa la dhoofiyey, mise, iyaga ayaa dhoofka doorbiday, oo waa loo fududeeyey? Teeda kale, gabdhaha maxaa loo la meeldhigay xoolaha la dhoofiyo, loogana dhigay dad aan lahayn arrin, afti qaadid iyo dookh? Saw ma ahan, intii aad is leheed, gabdhaha u dood, in aad adigu meel uga dhacday jiritaankooda, doorashadooda iyo sharafkooda, eedna la mid dhigtay xoolo la dhoofiyo, ee saylad la geeyo? Adoo Xasan eedayn raba, fadlan gabdhaha ha u soo marin, hana u gefin gabdhaha!
Sidoo kale, waxaan arkay muuqaal ay is ka soo duubeen hablo soo indho shareetay, oo Sucuudiga jooga oo leh; meeshaan waa xuntahay, ee ha is ku imaannina! Yaa! Hadday xun tahay, xaa adi ku dhigay, maa ka soo laabatid? Waa halkii maahmaahdu ka tiri; “Magaalo qayrkaa u caay, adna ka muraadso” kooxdaas oo kale waxaan u gartay, iney u arkaan, iney suuqa ku ciriiryayaan iyo shaqada. Tan kale, isweydii; dakhliga Sucuudiga laga soo diro bishii, meeqa ayaad ku qiyaasi leheed? Imisa qoys ayaa laga biilaa? Hadday xun yihiin, dakhligaana ha go’ee, gabdhaha nooga soo wada!
Anigu run ahaan, gabar dookheeda iyo doorashadeeda Sucuudiga u shaqo iyo xoogsi tagtay, wax aan ku dhaliilo ii ma muuqdaan, is ka daa mid dal ku gal ku galaysa, ee waxaanan dhaliil u hayn midda dhibkaa adag u maraysa, ee bulsho aan baranno, in aan dadka dookhooda tixgelinno, ka dib aan ka doodno waxa nooga iman kara ama ka dhalan kara.
Maxaad indhaha ugu taagee ADEEGTADA Sucuudiga joogta dhibka haysta, maad ka hadashaadan tan dalka dhexdiisa ku dhibaataysan, ee joogta guryaha ganacsatada, siyaasiyiinta iyo dadka dhaqaalaha leh. Waan wada ognahay, ee ma ADEEGTO ayaan u la dhaqannaa, si dadnimo iyo leh damiir? Ma ADEEGTO ayaa agteenna xushmad iyo ka leh xurmo? Ma ADEEGTO ayaa guryaheenna tixgelin iyo ku leh qaddarin? Kaaga darrane, xitaa dadka kale ayaa bahdila, iyadoo wiilka shukaansada xitaa lagu dacaayadeeyo, laguna bahdilo. Dalal kale ceebahooda iyo dhaqammadooda xunxun ha iiga sheekaysane, waxeenna xunxun iiga sheekee, oo iigu shakaal sidii aan isaga shireyn lahayn.
Waxa loo dig iyo dam leeyahay ma ahan gabdho jacayl, ee waa awr kacsi, kooxaha galmada ragga u yaqaan xaq, tan dumarkana xaqdarro, -dabcan badi ayaan ka hadlayaa, ee haddii sida ay idin la tahay-, haddii gabdhaha halkaa jooga ay carab fara xumeeyaan, maxaa loo waayey gabar keli oo Soomaaliyeed oo ilmo aan abbe lahayn? Waxaan ognahay, in waddammada Carabta badankii ay ka reebban tahay; in kaniiniga diidmada dhalmada la adeegsado, halka aan la oggolayn in la is ka soo rido ilamaha, haddaba, haddii gabdhaha la fara xumeeyo, maxaan loo arag, gabar uur leh aan la aqoon?.
Wali ma maqashay; Buur Karoole, Tumbuluq, Hoos u dhaadhac, oo Muqidisho aha, Guryasamo iyo Fuckinka oo Hargaysa ah, Buqda Jaamalaay oo Berbera ah, Uureyso iyo Uruuriska oo Burco ah? Haddaa maqashay maxaa ku maqashay? Yaan la is indha tirin, ee bulsho, ha la abbaaro dhibka rasmiga, inta lagu mashquuli lahaa, gabar dhaqaalaha dalka qayb ka qaadanaysa nafteedana meel ka soo saaraysa, iyagoo ay idiin joogaa QOORA DHEERAYAASHA aan wax lagu tarin, iyaguna wax is tarin!
Rafaadkii jidka, rafaadkii xeryaha lagu sugo dhoofka, rafaadkii badda, rafaadkii doonta, rafaadkii xeryaha Yemen, rafaadkii saxaraha iyo rafaadkii xadka marka aysan mari doonin, ee gabadha ka quraacata Muqdisho ama magaalo kale ee dalka ah, ay ka qadayn doonto ama ka cashayn doonto Jidda, Riyaad iyo magaalo kale ee Sucuudiga ah, anigu ma garan waxa intan oo xumaan ah, ee kaaga darane aan jirin loo xuso! Sida muuqata, dad xumaanta iyo dhibka jecel yahay ayaan nahay, oo gabdhaha xumaan ayaan la rabnaa kana sheegnaa, halka aan dhib iyo dhalandhool dhabbe is la rabno!
Previous Previous post: Muqdisho MAHDIN ayey naga mudan tahay!
Next Next post: Heshiiska Garoowe; shimbirayahow heesa iyo gacma daalis!